ကြက်ဥ ကိုင်တွယ်ခြင်းနှင့် စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း မြေသြဇာဥ ကိုင်တွယ်ခြင်းနှင့် စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း စက်ရုပ်အလိုအလျောက်စနစ် မှုတ်ဆေးအခြောက်ခံခြင်းနှင့် စက်ရုံသုံးပစ္စည်းများကို ကူးထည့်ခြင်း ကြက်ဥ မွေးမြူ ကာကွယ်ဆေး ထုတ်လုပ်ခြင်း။ ဇီဝလုံခြုံရေးနှင့် အစားအစာဘေးကင်းရေး
မစ်ရှင် & မျှော်မှန်းချက် တန်ဖိုးများ သမိုင်း ဘုတ်အဖွဲ့ & စီမံခန့်ခွဲမှု THORNICO ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း
SANOVO လုပ်ငန်းခွင်အဖြစ် ရာထူးလစ်လပ် မတောင်းဆိုသောလျှောက်လွှာ အလုပ်ကိုယ်စားလှယ်
စီမံကိန်းကိုစီမံခန့်ခွဲမှု ဒစ်ဂျစ်တယ် R&D ထောက်ပံ့ရေးဆိုင်ခွဲ စစ်ဆင်ရေး
မဟာဗျူဟာ Code of Conduct Company Karma အစီရင်ခံစာများ စီမံကိန်းများ ယဉျကြေးမှု
ဘာသာပြန်ဆိုချက်အားလုံးကို အာရုံကြောစက်ဖြင့် ဘာသာပြန်ဆိုထားခြင်းကို သတိပြုပါ။
တွေ့ဆုံမေးမြန်းချက်- ကြက်ဥနှင့် ကြက်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွင် ဇီဝလုံခြုံရေး၏ အရေးပါမှု
မကြာသေးမီအချိန်များတွင်၊ ဇီဝလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ခေါင်းစဉ်သည် လျင်မြန်စွာ ပို၍ အရေးကြီးလာသည်။ နှင့် ထိုသို့ ယခု ရှုထောင့်တစ်ခု၊ ကြက်ဥနှင့် ကြက်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွင် အားလုံးထက် လျှော့မတွက်နိုင်ပါ။ CEO o Niels Krebs နှင့် ဤအင်တာဗျူးကိုဖတ်ပါ။f SANOVO ပိုမိုလေ့လာရန် BIOSECURITY။
“ဇီဝလုံခြုံရေးသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ပတ်ဝန်းကျင်တွင်ရှိသော အန္တရာယ်ရှိသော သေးငယ်သောသက်ရှိများနှင့် သက်ဆိုင်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏အစားအစာများတွင်လည်း စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းတွင် လုပ်ကိုင်နေပါက အစားအစာပြန်လည်သိမ်းဆည်းခြင်းအကြောင်း သင်စဉ်းစားပေမည်။ အစားအသောက်ပြန်လည်သိမ်းဆည်းခြင်းသည် စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းများကို ထိခိုက်စေပါသည်။ ပြန်လည်သိမ်းဆည်းမှုတစ်ခုသည် ပျမ်းမျှ ယူရို ၁၀ သန်းခန့် ကုန်ကျပြီး လူအများ၏အာရုံစိုက်မှုကို ရရှိကာ အမှတ်တံဆိပ်များကို ပျက်စီးစေနိုင်သည်။ ဒါက ဇီဝလုံခြုံရေးရဲ့ ပထမဆုံး ရောင်ပြန်ဟပ်မှုလို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။”
ကြက်ဥနှင့် ကြက်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွင် ဇီဝလုံခြုံရေးအကြောင်း ပြောသောအခါ အဓိက ခြိမ်းခြောက်မှုကား အဘယ်နည်း။
“အကြိမ်များစွာ၊ ကုမ္ပဏီတစ်ခုသည် ဇီဝလုံခြုံရေးစည်းမျဉ်းများကို ကြည့်ရှုပြီး ၎င်းတို့လိုက်နာရမည့်အရာများကဲ့သို့ မြင်သော်လည်း ၎င်းနောက်ကွယ်တွင် ပိုကြီးသောအကြောင်းပြချက်တစ်ခုရှိသည်။
ကြက်ဥနှင့် ကြက်မွေးမြူရေးကဏ္ဍအတွင်း အဓိကစိန်ခေါ်မှုမှာ ပြည်သူများ၏ တောင်းဆိုမှု အပြောင်းအလဲဖြစ်သည်။ နောက်ထပ်ဖောက်သည်အများအပြားသည် အခမဲ့အကွာအဝေးသို့ သွားကာ သကြား၊ ဆားနှင့် ကြာရှည်ခံပစ္စည်းများကို လျှော့စားလိုကြပြီး GMOs များကို အသုံးမပြုသင့်ပါ။ အများသူငှာ စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများအပြင် ဖောက်သည်များထံမှ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအမြင်များပါ တိရစ္ဆာန်သက်သာချောင်ချိရေးသည် သင့်ထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်သည့်ပုံစံကို အမှန်တကယ်ပြောင်းလဲနေသော အရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤအရာအားလုံးသည် ဘေးကင်းသော ထုတ်ကုန်များ ထုတ်လုပ်နိုင်ခြင်းအတွက် ပိုဆိုးလာသော နောက်ခံကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ သင့်ထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်ရာတွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အရာများ ကွဲပြားသောအခါတွင် ညစ်ညမ်းမှုအန္တရာယ်သည် ပိုမိုကြီးမားလာသည်။ ထို့ကြောင့် ပြန်လည်သိမ်းဆည်းနိုင်ခြေသည် ယခင်ကထက် များစွာမြင့်မားသည်။ ဤသည်မှာ လွန်ခဲ့သော 10-15 နှစ်ကနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ယနေ့ခေတ် ထုတ်လုပ်သူများ ရင်ဆိုင်နေရသော စိန်ခေါ်မှုအသစ်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။
ဒါကြောင့် အစာအဆိပ်သင့်ခြင်းအကြောင်းပြောရင်၊ သင့်အစားအစာကြောင့် ဖျားနာနိုင်ခြေ၊ Salmonella နဲ့ Campylobacter တွေဟာ ယနေ့ခေတ် EU မှာ အဖြစ်အများဆုံး အစားအသောက်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ရောဂါတွေပါ။ နှစ်စဉ် လူပေါင်း ၂၅၀,၀၀၀ ကျော် ဆေးရုံတက်နေရပြီး ၃၀,၀၀၀ ကျော်ရှိသည်။1 ပိုးသတ်ဆေးယဉ်ပါးမှုကြောင့် နှစ်စဉ်သေဆုံးကြသည်။ Antimicrobial resistance သည်ကျွန်ုပ်တို့ပိုမိုပြောဆိုနိုင်သည့်အရာဖြစ်သည်၊ သို့သော်ကြက်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သိထားရမည့်အရေးကြီးသောအချက်တစ်ခုမှာ ကြက်များ၏ 60% ကျော်သည် ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုနေသော ပဋိဇီဝဆေးကိုခံနိုင်ရည်ရှိသော ရောဂါပိုးမွှားများသယ်ဆောင်လာခြင်းဖြစ်သည်။2. အဲဒါကြောင့် ဒီကိစ္စကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းဖို့က အရေးကြီးတယ်။”
အထူးသဖြင့် ဤလုပ်ငန်းတွင် ကုမ္ပဏီအားလုံးအတွက် ဇီဝလုံခြုံရေးကို တိုးမြှင့်အာရုံစိုက်ရန် အဘယ်ကြောင့် အလွန်အရေးကြီးသည်ဟု သင်ထင်သနည်း။
“ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ပိုးသတ်ဆေးယဉ်ပါးမှုက အရမ်းအန္တရာယ်များလို့ပါ။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ် မတိုင်ခင်က လူတွေဟာ ရိုးရှင်းတဲ့ ဒဏ်ရာတွေနဲ့ ခွဲစိတ်မှုတွေကြောင့် သေဆုံးသွားတယ်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ ထိုအချိန်မှစ၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့အား ကုသရန် ပဋိဇီဝဆေးများ ထားရှိခြင်းကို အသုံးပြုလာကြသည်။ ဒီနေ့ ရိုးရှင်းတဲ့ဒဏ်ရာက မင်းကိုသတ်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ပေမယ့် ဘက်တီးရီးယားတွေ ပိုပိုပြီးခံနိုင်ရည်ရှိနေသရွေ့တော့ ဒါက ပြဿနာဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ 2050 မှာ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။3 ယနေ့ခေတ် ကင်ဆာရောဂါဖြင့် သေဆုံးသူများထက် ပိုးသတ်ဆေး ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းကြောင့် သေဆုံးသူများ ပိုများလာမည်ဖြစ်သည်။ အနာဂတ်တွင်၊ သင့်သမီးသည် နမိုးနီးယားဖြစ်နိုင်ပြီး အသက် 20 မပြည့်မီသည့် အန္တရာယ်ရှိနိုင်သည်၊ ၎င်းသည် ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ကြုံတွေ့နေရသည့်အရာထက် အခြားအဖြစ်မှန်ဖြစ်သည်။ အစိုးရများနှင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအပေါ် ဖိအားများသည် ကြီးမားမည်ဖြစ်ပြီး၊ ဤဖိအားများသည် အစားအသောက်ထုတ်လုပ်သူများအပေါ် ပြန်လည်သက်ရောက်စေမည်ဖြစ်သောကြောင့် ၎င်းသည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော ပဋိဇီဝပိုးသတ်ဆေးယဉ်ပါးသော ဘက်တီးရီးယားများပေါက်ဖွားရာနေရာဖြစ်သည်။
ဥပမာအားဖြင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း အစာအဆိပ်သင့်မှုကြောင့် နှစ်စဉ် လူ ၄၀၀,၀၀၀ ကျော် သေဆုံးနေပါသည်။4. ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့5 ပဋိဇီဝဆေးများကို ခံနိုင်ရည်ရှိသော ဘက်တီးရီးယား ၁၂ မျိုးကို သတိပေးထားပြီး ၎င်းတို့အနက် ၅ ဦးမှာ မွေးရာပါ အစားအစာဖြစ်ပြီး ခုနစ်ဦးသည် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွင် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ နှင့် 60% of ကြက် တင်ဆောင်လာသော ဤခံနိုင်ရည်ရှိသောဘက်တီးရီးယား, tသူ့ကြောင့်လား။ အထူးသဖြင့် ကြက်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများတွင် အစားအသောက်ကုမ္ပဏီများအတွက် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ တာဝန်ယူပြီး ကြိုတင်ကာကွယ်မှုတွေ အကောင်အထည်ဖော်ပါ။"
SonoSteam ဆိုတာ ဘာလဲ ၊ ၎င်းသည် ထုတ်လုပ်မှု၏ ထိရောက်မှုကို အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စေပါသလား။
"SonoSteam သည် ရေနွေးငွေ့နှင့် အာထရာဆောင်းတို့ကို အသုံးပြု၍ အလွန်သန့်ရှင်းသော လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။ ရေနွေးငွေ့သည် ဘက်တီးရီးယားများကို သေစေသော အပူဖြစ်ပြီး အာထရာဆောင်းသည် ဓာတ်ကူပစ္စည်းတစ်ခုသာဖြစ်သည်။ SonoSteam သည် ကြက်၏မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ ဘက်တီးရီးယားများကိုသာမက အခြားသော မျက်နှာပြင်အမျိုးအစားများကိုပါ သေစေနိုင်သည်။ ၎င်းကို ပုံမှန်ထုတ်လုပ်မှုအမြန်နှုန်း (နှေးကွေးမှုမရှိစေရ) တွင် မျဉ်းကြောင်းအတိုင်းလုပ်ဆောင်နိုင်သောကြောင့် မည်သည့်သတိထားစရာမှ မလိုအပ်ပါ၊ ၎င်းကို ပုံမှန်လုပ်ဆောင်မှုလိုင်းအဖြစ် ပေါင်းစည်းနိုင်သည်။ SonoSteam ကို အစားအသောက်လုပ်ငန်းအပြင်၊ မွေ့ယာပေါ်ရှိ ဆေးရုံများတွင်လည်း အသုံးပြုပါသည်။ SonoSteam ကို မူပိုင်ခွင့်တင်ထားပြီး ဤနည်းဖြင့် လုပ်ဆောင်နေသည့် ၎င်း၏ တစ်ခုတည်းသော လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။"
SonoSteam နဲ့ အောင်မြင်ပြီး ပန်းတိုင်က ဘာလဲ။ SANOVO ဇီဝလုံခြုံရေး?
“SonoSteam ဟာ ယူကေမှာ အဖြစ်များဆုံး အစာအဆိပ်သင့် ဘက်တီးရီးယား ဖြစ်လို့ Campylobacter ကို အစားအသောက် စံအေဂျင်စီက အာရုံစိုက်ချင်တဲ့အခါ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာက UK ကို တိုးချဲ့ခဲ့ပါတယ်။ 10-2010 တွင် ဤပရောဂျက်တွင် ပေါင် 2015 သန်း ထည့်ဝင်ခဲ့သည်။ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကြက်များတွင် Campylobacter အဆင့်ကို လျှော့ချရန်ဖြစ်သည်။ အစားအစာစံအေဂျင်စီ FSA နှင့်စပ်လျဉ်း6SonoSteam သည် UK စျေးကွက်ရှိ Campylobacter အဆင့်ကို ကျဆင်းစေသည့် အဓိကအကြောင်းရင်း သုံးခုထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ အခုဆို လူတွေ ဖျားတာ သက်သာရုံတင် မကဘူး ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု စရိတ်ကလည်း ကျသွားတယ်။7. ယခု ရင်းနှီးမြုပ်နှံခြင်းသည် ရေရှည်တွင် ငွေစုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
UK သည် Campylobacter ပမာဏကို ပထမဆုံးအာရုံစိုက်ခဲ့သည်။ ယခု 2018 တွင်ကျန်ရှိသော EU သည်ကြက်တွင်ခွင့်ပြုထားသော salmonella ပမာဏကိုထိန်းညှိပြီးသားဖြစ်သောတစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေးစံနှုန်းများကိုထည့်သွင်းနေသည်။ ဤနေရာတွင် 2021 ခုနှစ်၊ နှင့် 2025 ခုနှစ်ဆီသို့ ခွင့်ပြုထားသောအရေအတွက် Campylobacter 1000 cfu အထက်နမူနာ ဆက်လက် နှိမ့်ချသွားမည်။ ဒီတော့ ပန်းတိုင်ကို ခြုံငုံကြည့် SANOVO Biosecurity သည် လူ့အသက်များကို ကယ်တင်ရန်နှင့် လူသားများ၏ သက်သာချောင်ချိရေး တိုးမြှင့်ရန်ဖြစ်သည်။”
Niels Krebs - အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် SANOVO နဲ့နွယ်
1 ECDC၊ ဥရောပရောဂါကာကွယ်ရေးနှင့် ထိန်းချုပ်ရေးစင်တာ
2 EFSA၊ ဥရောပအစားအစာဘေးကင်းရေးအာဏာပိုင်
3 Rand ဥရောပ; မူးယစ်ဆေးဝါး ခံနိုင်ရည်ရှိသော ကူးစက်ရောဂါများကို ကမ္ဘာအနှံ့ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရေး၊ UK အစိုးရ၊ မေလ 2016
4 WHO၊ ဒီဇင်ဘာ 2015
5 WHO၊ ဖေဖော်ဝါရီ 2017
6 FSA; https://www.food.gov.uk/news-updates/news/2016/14910/signs-of-further-progress-on-campylobacter-reduction
7 FSA; https://www.food.gov.uk/news-updates/news/2017/16052/latest-figures-reveal-decline-in-cases-of-campylobacter
အကောင်းဆုံး စီမံခန့်ခွဲသည့် ကုမ္ပဏီများ 2022 အောင်မြင်သူ
တစ်ရက်လျှင် ကြက်ဥ2သန်း - အဆင့်သတ်မှတ်ပြီး ထုပ်ပိုးခြင်း သို့မဟုတ် ကွဲထွက်ပြီး စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း
အလုပ်ချိန်နည်းပါးခြင်းနှင့် မြင့်မားသောထွက်ရှိမှုမှတစ်ဆင့် စက်ရုံ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။
ကြက်ဥ အဆင့်သတ်မှတ်စက်ကို ဝယ်ယူသည့်အခါ ပိုမိုထက်မြက်သော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါ။
လူကိုယ်တိုင် ပြပွဲများသို့ အောင်မြင်စွာ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာခြင်း။
ကျွန်ုပ်တို့၏သတင်းလွှာအတွက် စာရင်းသွင်းပါ။ သတင်းများနှင့်အတူ up to date ဖြစ်ပါစေ။
ISO အသိအမှတ်ပြု ဒိန်းမတ်
ISO လက်မှတ် အီတလီ
ISO လက်မှတ် နယ်သာလန်
အစားအသောက် ဆက်သွယ်ပစ္စည်း (FCM)
မှုတ်ဆေး အခြောက်ခံခြင်း နှင့် pasteurization စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး လျှောက်လွှာ
ဥမွေးမြူ ကာကွယ်ဆေးများ ထုတ်လုပ်ခြင်း။